Information for those who have been in close contact with someone who has Covid 19 - 1177 Vårdguiden
Information till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19 - somaliska
Warbixin loogu talagalay qofka adigoo kale ah oo xiriir dhow la yeeshay qof u cudurka [covid-19] ku dhacay
Information till dig som har haft kontakt med någon som har covid-19 - somaliskaThe content concerns Västmanland
Haddii aad xiriir dhow la yeelatay qof u cudurka [covid-19] ku dhacay, waa inaad fiirogaar siisaa calaamadaha cudurka oona hoos u dhigta tirada dadyowga aad la kulanto. Haddii qof aad la nooshahay u cudurka [covid-19] ku dhacay, waa inaad tixgelisaa nidaamyo hab-dhaqan oo gaar ah.
Haddii aad la degan tahay ama hoy la qaybsato qof u cudurka [covid-19] ku dhacay
Lagaba bilaabo markii taariikhda ay ku beegan tahay 1 oktoobar, waxaa hirgeli doono nidaamyo hab-dhaqan oo gaar ah, kuwaaso khuseeya qofka adigoo kale ay oo ay isku hoy yihiin qof u cudurka [covid-19] ku dhacay, kaasoo ku sugan xilliga u qof kale cudurka qaadsiin karo.
7 maalmood ee ugu horeeyo, kuwaaso lag soo bilaabo taariikhda qofka aad la degan kaddib markii shaybaar laga qaaday la xaqiijiay in uu cudurka [covid-19] ku dhacay, waa inaad hawlaha shaqada ama waxbarashada (khuseeya ardayda dugsiyada sare iyo kulliyadaha) aad ku dhaqaaqda adigoo gurigaaga ku sugan.
Waa inaad qofka madaxa ku ah aad wargelisaa in cudurka lagu qaadsiiyay.
Waa inaad ka taxadartaa nadaafadda gacmahaaga.
Maalinta 5-aad ee ku xigta maalinta shaybaar lagu xaqiijiyay qofka aad la degan tahay in uu cudurka [covid-19] ku dhacay, waa inaad qabsato ballanka shaybaar iska qaadista ee loo yaqaanno (PCR) oo xiriirka la leh cudurka [covid-19]. Taasoo macneheeda ay tahay in markii taariikhda ay ku beegnayd 1 oktoobar haddii qofka la nooshahay shaybaar lagu xaqiijiyay in uu cudurka ku dhacay waa inaad sharbaarka ballansataa 6 oktoobar (shan maalmood
Kaddib markii shaybaarka cudurka [covid-19] laga qaaday, kaasoo lagu xaqiijinin in uu cudurka kugu dhacay, oona aadan lahayn calaamadaha cudurka, waa inaad xaaladaas 7 maalmood kaddib tixraacda talo-siinta xiriirka la leh xiriirada kale ee dhow (hoos ka aqriso). Laga bilaabo maalinta qofka u cudurka [covid-19] ku dhacay ka ciribtirmeen calaamaha cudurka, adiguna kuma qaadsiin karo cudurka, laakin waa inaad fiirogaar siisaa calaamadaha cudurka oona muddo 14 maalmood tixraacda qodobada dardaaranka hoos ku xusan.
Haddii aad xiriir dhow la yeelatay qof u cudurka [covid-19] ku dhacay laakinse isku hoy aadan ahayn
Waa inaad fiirogaar siisaa calaamadaha cudurka kuwaasoo ah astamaha cudurka [covid-19]. Muddo ka kooban 14 maalmood, tiriskaas oo laga soo bilaabo maalinta cudurka lagu qaadsiiyay waa inaad hoos u dhigto tirada dadyowga aad la kulmi jirtay. Xitaa haddii aad caafimaad-wanaag dareemayso waa inaad tixgeliso qodobada hoos ku xusan:
Waa inaad hoos u dhigto tirada dadyowga aad la kulmi jiratay. Tan kale waa inaad aad u tixgeliso kala fogaanshada/musaafada ee qofka aad la kulanto (1,5–2 mitir).
Waad aadi kartaa goobta shaqada, iskuulka ama dugsiga xannaanadda haddii caafimaadkaaga u wanaagsan yahay, laakin waxaa lagugu boorinayaa inaad ka fogaato dhaqdhaqaaqyada bulshada ee gudaha ee goobaha wakhtilummiska sida tusaale carbiska gudaha, casuumidyaasha iyo xafladaha.
Waa inaad qofka madaxa ku ah aad wargelisaa in cudurka lagu qaadsiiyay. Hawlaha shaqada ka qabo adigoo gurigaaga ku sugan.
Fayruuska [corona] sidee ba lays qaadsiiyaa?
Fayruuska [corona] wuxuu ku faafaafa isagoo adeegsanayo dhibic-dhibic iyo taabashada. Markii qofku u hindhiso, qufaco ama u hadlayo waxaa hawada agagaarkiisa ku abuurmayo dhibicyo. Haddaba qofka agtiisa ku sugan wuu qaadsiin karaa cudurka. Markii dhibcaha ay ku dhacaan sagxadda/dusha/baaxad ama shay waxaa sidaas ku faafayo maaddada cudur-keenaha, badi ahaan gacmaha ayay adeegsadaan. Haddii qof u indhahiisa taabto ama sankiisa isagoo kahor gacmaha iska dhaqin, wuxuu fayruuska sida u ku faafo kuna soo galo gudaha jirka awgeed adeegsan karaa waddadaas.
Muddada u dhaxayso maalinta qofka cudurka la qaadsiiyay ilaa u ka xannuunsado (xilliga cuqfadhiga) waa 2 ilaa 14 maalmood, caadi ahaan shan maalmood.
Warbixin dheeraad oo ku saabsan sida fayruuska [corona] laysku qaadsiiyo ka aqriso Läs mer om hur coronavirus smittar
Waa kuwee calaamadaha cudurka [covid-19] ee ugu caadiyeeysan?
Calaamadaha cudurka [covid-19] ee ugu caadiyeeysan waa qandho, hargab, qufac, cillada neefsashada, dhuun-xannuun, madax-xannuun, muruq-xannuun, hoos u dhaca awoodda dhadhanka iyo urinta, calool-xannuun iyo shuban. Dadka badidooda hab fudud ayuu ugu dhaca halka kuwa kalena u hab aad u culus ugu dhaco oo ay dareemaan cillada neefsashada waxayna u baahan yihiin in isbitaal lagu daryeelo.
Warbixin dheeraad oo ku saabsan calaamadaha cudurka fayruuska [corona] ka aqriso
Haddii aan xannuunsado sidee ba wax yeelaa?
Dadyowga laga bilaabo ilmaha lagu xannaanadeeyo dugsiga xannaanadda iyo kuwa ka waawayn
Haddii aad calaamadaha cudurka dareento, xitaa kuwa fudud, waa inaad guriga iska joogto oona shaybaarka cudurka [covid-19] ballansato. Warbixin ku saabsan sida shaybaarka loo ballansado halkaan ka aqriso: Provtagning för covid-19 i Västmanland. Muddada aad natiijada shaybaarka sugayso waa inaad tixgelisaa talooyinka la siiyo qofka u cudurka [covid-19] ku dhacay. Markii aad shaybaarka dalbato ayaa warbixin dheeraad lagu siinayaa.
Ilmaha dugsiga xannaanadda
Ilmaha dugsiga xannaanadda oo leh calaamadaha cudurka, waxaa lagula talinayaa in aqalkooda iska joogan, iyagoo aan laga qaadin shaybaarka cudurka [covid -19]. Cunugga waa in guriga iska joogaa xilliga u calaamadaha cudurka dareemayo, iyo 2 maalmood oo dheeraad ah kaddib markii u cudurka ka bogsado. Cunugga muddada u xannuunsan yahay waa in usan wax xiriir la yeelan dad dibada ku sugan.
Ka bogsahsada kaddib haddii cunugga u weli la dhiban yahay calaamadaha cudurka oo fudud, sida tusaale qufac aan xaako lahayn iyo hargab, wuu ku laaban karaa dugsiga xannaanadda waa haddii ay ka soo wareegatay ugu yaraan 7 maalmood tan iyo markii u xannuunsaday.
Sidee baan wax yeelaa haddii cudurka [covid-19] ama cudur kale dartiisa aan u baahanahay daryeel-caafimaadeed?
Haddii aad u baahan tahay talo-siin, waa inaad marka hore khadka taleefanka kula xiriirta rugta daryeel-caafimaadeedka ee aad ka tirsan tahay ama 1177 Vårdguiden. Haddiise xaaladaada ay halis ku jirto wac 112. Wargeli in lagu qaadsiiyay cudurka [covid-19].
Ma sidaas baan u dhaqma haddii berri hore u cudurka [covid-19] igu dhacay?
Haddii berri hore u cudurka [covid-19] kugu dhacay, taasoo fayruuska lagu xaqiijiyay shaybaarka loo yaqaanno [PCR-prov] oo falanqayn lagu sameeyay goobaha shaybaarka, oo ku salaysan shabaar laga qaaday 6 bilood ee ugu dambeeyeen laga soo qaaday afka/cunaha/sanka ama la xaqiijiyay jiritaanka unugyada difaaca jirka/lidjiryada, xaaladaas dardaaranka kor ku xusan kuma khuseeyo. Iyadoo sidaas tahay waa in haddana aad fiirogaar siisaa calaamadaha cudurka, oona guriga iska joogto haddii aad xannuunsato, ilaa aad gebi ahaan ka bogsato.
Haddiise shaybaarka laga qaaday u ahaa kan loo yaqaanno ”snabbtest” oo ah shaybaarka dhaqsida badan, oo ahaa shaybaarka dhiigga kaasoo natiijadiisa lagu wargeliyay hal sac kaddib, xaaladaas waa inaad tixgelisaa dardaaranka kor ku xusan, iyadoo fiirgaar aan siin nooca natiijada shaybaarka. Sidoo kale haddii difaaca jirkaaga u hooseeyo ama aad dareento calaamadaha cudurka oo aad u culus waa inaad daryeel-caafimaadeedka raadsato.
Warbixin dheeraad oo ku saabsan cudurka [covid-19] halkee ayaan ka heli karaa?
Warbixin dheeraad oo ku saabsan cudurka [covid-19] ka aqriso bogyada Om covid-19 – coronavirus